Fahazoana Vaovaom-Panjakana: Zonao izany! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2012 8:16 GMT
Vakio amin'ny teny English, Magyar, Français, 繁體中文, 简体中文, Español
Tsy hoe mora lalandava ny mahazo ny vaovao, angon-drakitra ary antontan-taratasy any amin'ireo sampan-draharaham-panjakana, na dia marina aza fa an'ny olom-pirenena ihany ireo vaovao sy angona eny an-tànan-dry zareo. Amin'ny tena izy, be sakana lalovana ny fahazoana ireo vaovao ireo izay manitsakitsaka ireny fifanarahana iraisam-pirenena ireny toy ny Dinan'ny Filankevitr'i Eoropa amin'ny Fahazoan-dàlana hikirakira ireo Antontan-taratasim-panjakana ary koa ireo lalàna eran-tany maherin'ny 93 isa momba ny fahazoam-baovao.
Izany no antony anankiray nandrisika ireo fikambanan'ny sosaity sivily sasany, izay manokan-tena ho amin'ny fikatrohana hisian'ny mangarahara, nanangana karazana vovonana an-tserasera hahafahan'ny olona mangataka ireo karazam-baovao avy amin'ny sampan-draharaham-panjakana. Any Eoropa, ny tanjon'ny vavahadin-tserasera AsktheEU.org dia ny mba ho mpanalàlana amin'ny fangatahana eo anivon'ireo andrim-panjakana Eoropeana fa kosa ny Your right to know [es], noforonina sady notantanan'ny ONG Access Info Europe miaraka amin'ny fiaraha-miasan'ny Fundación Civio [es], an'ny ivon-toeram-panjakana Espaniola, vovonana manome fahafahana ny olom-pirenena handefa mivantana fangatahana fampahalalàna isan-karazany any amin'ny fandraharahana ara-panjakana tiany handefasana azy, na any amin'ny faritra na manerana ny firenena izy ireny. Io hevitra io dia avy taminà tranonkala anglisy iray WhatDoTheyKnow?, noforononin'ny MySociety ary nifototra tamina lozisiely malalaka atao hoe Alaveteli. Misy karazany amin'izany fitaovana izany koa any Brazila, Alemàna, Shili, Kosovo, ary Orogoay, niaraka tamin'ilay tranonkala vao nisokatra vao haingana What do you know? [es].
Miovaova arakaraky ny firenena ny vokatr'izany ary miankina amin'ny lalàna mikasika ny fahazoam-baovao samihafa misy ao an-toerana. Any Espana, ny lalàna dia mametra ny sehatra fampiharana izany lalàna izany ka manome vahana ny fahanginan'ny fitantanana ara-panjakana, izany hoe raha toa ka tsy mahazo valiny izy ireo, dia nolavina izay ilay fangatahana. Espana no firenena tokana ao anatin'ny Vondrona Eoropeana manana mponina mihoatra ny 1 tapitrisa izay tsy misy lalàna mangarahara ao aminy (afa-tsy ny lafin'ny tontolo iainana). Na dia efa miandry fandaniana aza ny volavolam-panitsiana lalàna eo anivon'ny Parlemanta amin'izao fotoana izao, ireo manam-pahaizana manokana izay efa namakafaka azy ity sahady dia nilaza azy io ho tsy ampy mihintsy, sady latsaka ambanin'ny fenitra erantany [es]. Raha lany ka tafajoro ilay Lalàna momba ny mangarahara, dia tsy hisy akory fiovàna misongadina amin'izany tsy fahampian'ny fangaraharana izany.
Tena maro ireo karazana hetsika mitovitovy amin'izany, toy ireo izay voalaza etsy ambony, izay mampiasa ny aterineto ihany koa hanamoràna ny fahazoana malalaka ny vaovao, mitaky ny zo mba hahalala, ary mamorona fandrisihana ny fandraisan'andraikitr'ireo sampan-draharaham-panjakana. Amin'io lafiny io, TweetyourMEP sy ny Tweetminster ary TweetCongress dia manamora ny fahazoana mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny Twitter ho an'ny solontenan'ny Vondrona Eoropeana na mpanao politika hafa izay tian'ny olona hiresahana.
Ny zo hahafahana mahazo vaovao dia zo fototra mifandray amin'ny fahalalahana maneho hevitra. Ny fampahalalàm-baovao no fanalahidy anankiray hamoriana ny hevi-bahoaka ary, noho izany, manamora ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny fizotran'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tokony tsy ho an-tery fotsiny no hamalian'ny sampan-draharaham-panjakana ny olom-pirenena fa kosa natao mba hampitombo ny fifampitokisana eo amin'ireo olon-tsotra sy ireo misolo tena azy ireo. Raha mba nangarahara bebe kokoa sady tompon'andraikitra tamin'ny asany ireo sampan-draharaham-panjakana, dia mba nihena ny hantsana nisy tamin'izy ireo. Ny Fanadihadiana nataon'ny CIS [es] dia nampiseho fa ny laharana fahatelo amin'ny olan'ny ampahaefatrin'ny Espaniola dia ny fitantanan'ireo mpanao politika. Tsy kisendrasendra anefa ny fitrangàn'izany any Espana, raha raisina anaty kajikajy hoe tsy mampihatra ilay lalàna mitondra ny laharana faha-10 ao amin'ny Fifanarahana Eoropeana mikasika ny zon'olombelona izay miaro “ny fahalalahana hahazo na mampita vaovao na hevitra” ity firenena ity. Tamin'ny Aprily 2009, ny Fitsarana Eoropeana momba ny zon'olombelona dia nanaiky fa ny zo amin'ny fahalalahana maneho hevitra dia tafiditra manokana ao anatin'ny zo hahafahana mahazo vaovao [es] eny anivon'ireo sampan-draharaham-panjakana maro samihafa.